I-china i-quick turn prototype gold plating PCB ne-Counter sink hole abakhiqizi nabaphakeli | Kangna
okusheshayo baphendukela sibonelo igolide Plating PCB nge Counter echibini imbobo
Ububanzi besikhala / isikhala esincane: 6 mil
Min imbobo usayizi: 0.30mm
Iqedile ukujiya kwebhodi: 1.20mm
Umbala wesifiva sesolder: luhlaza “
Isikhathi sokuhola: izinsuku ezingu-3-4
Umbala we-Solder mask: oluhlaza``
Isigaba sokuqhakambisa yisikhathi esibucayi kakhulu sohlelo locwaningo nentuthuko.
Ukuze Mfushane isikhathi ucwaningo nentuthuko, udinga umakhi PCB ukukhiqiza sibonelo ngokushesha.
Ngemuva kwalokho kwavela uhlobo lokujika okusheshayo.
Ngokwenza i-PCB, uKangna unokuhlangenwe nakho kokukhiqiza i-PCB iminyaka engaphezu kwengu-14 (kusukela ngo-2006). Ukukhetha kwethu kungagcini nje ukunciphisa isikhathi sokukhiqiza se-PCB kepha futhi kunciphisa izindleko futhi uthole amabhodi aphezulu. Singakunika imodeli esezingeni eliphakeme enesikhathi esifushane sokukhiqiza ngentengo yokuncintisana.
Ngokuvamile, uma indawo ephelele ye-PCB yakho enephunga ingaphansi kwemitha eyisikwele engu-0.1, sithatha i-oda njengesibonelo.
Ayikho i-MOQ enomkhawulo, noma ngabe u-oda i-PC eyodwa, sizokwamukela i-oda ngokungathi sína.
Isikhathi esivamile sokuhola siyizinsuku ezi-5 zebhodi elilodwa elisezinhlangothini nezendlalelo ezimbili, izinsuku eziyi-7 ungqimba olungu-4, izinsuku eziyi-9 ngongqimba olungu-6, izinsuku eziyi-10 ngongqimba, izinsuku eziyi-12 zebhodi lezingqimba eziyi-10.
Ngesibonelo esisheshayo, singaqedela ukukhiqizwa kwesibonelo sebhodi elilodwa emaceleni kanye nongqimba olulodwa kungakapheli usuku olulodwa noma izinsuku ezimbili, izinsuku ezingama-3-4 ngongqimba, izinsuku ezi-4-5 ngezingqimba ezi-6, izinsuku ezi-5-6 ngongqimba olu-8, 6 -7 izinsuku zebhodi lesendlalelo eli-10.
Lapho usuku olusebenzayo luncane, intengo ibiza kakhulu.
Ngemuva kokwamukela i-oda lakho, unjiniyela wethu uzocwaninga amafayela wakho we-Gerber ukuze aqiniseke ukuthi athobela amandla ethu obuchwepheshe. Lapho amafayela esekudlulisile ukuhlolwa, ungakhokha izindleko. Lapho-ke unjiniyela wethu uzophinda ahlole futhi alungiselele amafayela ukukhiqiza. Kwesinye isikhathi umbuzo othile wobunjiniyela uvuka.
Ukuqedela ukukhiqizwa ngesikhathi, udinga ukuphendula imibuzo yobunjiniyela kusuka kunjiniyela wethu ngesikhathi ngokushesha okukhulu.
Isikhathi esichithwe embuzweni wobunjiniyela asibalwa njengesikhathi sokukhiqiza.
Uma u-oda ngemuva kwesikhathi se-P5.00 china, isikhathi sokukhiqiza sizobalwa kusukela ngosuku olulandelayo lwakusasa.
Langaphambilini Ivolumu ephansi ye-PCB SMT Assembly
ukucwiliswa emaceleni egolide Ibhodi elisuselwa ku-Ceramic
Ivolumu ephansi ye-PCB SMT Assembly
3 oz solder imaski wokufaka ENEPIG zethusi esindayo b ...
I-1.6mm prototype esheshayo ejwayelekile ye-FR4 PCB
Resin wokufaka imbobo Microvia Ukucwiliswa isiliva H ...
6 ungqimba impedance ukulawula eqinile-flex ibhodi nge ...